Waa kuma Xamsa Cabdi? Ra’iisal Wasaaraha la magacaabay ee DF Somalia?!! | Hadalsame Media
Home Maqaallada Waa kuma Xamsa Cabdi? Ra’iisal Wasaaraha la magacaabay ee DF Somalia?!!
Waa kuma Xamsa Cabdi? Ra’iisal Wasaaraha la magacaabay ee DF Somalia?!!
(Hadalsame) 15 Juun 2022 – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa Ra’iisal Wasaare u magacaabay Xamsa Cabdi Barre oo ah xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka xubin ka ahaa xisbiga Madaxwayne Xasan Sheekh.
Madaxweynaha ayaa sheegay inuu in muddo ah ka baaran dagaya xulashada qofka noqon doono ra’iisal wasaaraha, islamarkaana uu u arkay inuu Xamsa yahay shakhsi ka soo bixi kara howshan.
Xamsa oo hadlay ka dib magaacbistiisa ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukumad u qalanto inay dalka samatabixiso kana sahqeyso hadafka ah Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah.
Haddaba Waa kuma ra”isal wasaaraha cusub?
Xamsa ayaa xilka kala wareegaya Raysul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo hadda ah raysul wasaaraha xil-gaarsiinta ah ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Previous articleMW Putin oo la sheegay inay ilaaladiisu boorso ku qaadaan saxaradiisa marka uu booqanayo dal kale & Sababta + Muuqaal
Next articleHadal CULUS oo uu hadda kahor sheegay Raysal Wasaaraha magacaaban oo soo baxay (Daawo)